Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Enyere ya ka ọ bụrụ dike njem nlegharị anya mbụ si Azerbaijan
Awards • Akụkọ Azerbaijan na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • WTN
MaazịEfsun Ahmadov bụ onye isi ala Group ọzọ LLC na Azerbaijan, e nyekwara ya ohere ịbanye na Hall of Internationa Hero of Tourism Hero.
Maazị Ahmadov bụ dike mbụ na njem nlegharị anya si Azerbaijan.
Ọ gosipụtala onye ndu n'oge nsogbu COVID-19 n'inye ndị ọrụ afọ ofufo iji nyere ụlọ ọrụ ahụike aka.
Njem Nleta Ụlọ Ndị dike bụ atụmatụ nke World Tourism Network na ndị otu nọ na mba 128.
N'ihi ọrịa na -efe efe, ụwa na -enwe nsogbu njem nlegharị anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ. Ọ dịkwa maka Azerbaijan.
Ka o sina dị, ndị ọrụ nlegharị anya hụrụ ọrụ ha n'anya na -agbasi mbọ ike ichebe na ịzụlite ụlọ ọrụ ha. Otu n'ime ndị a bụ Maazị Efsun Ahmadov.
N'oge ọrịa na -efe efe, ọ rụrụ ọrụ dị ka ịhazi ụgbọ njem maka ibuga ndị dọkịta ọrụ.
Ọ haziri ọrụ afọ ofufo maka ibuga ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ dị mkpa maka ndị ọrịa Covid; na -enye nkwado ozi na ọrịa ọjọọ.
Maazị Ahmadov na-agbake na COVID-19 n'onwe ya mgbe ya na ya na-akparịta ụka eTurboNews
Ndị ọbịa US: Hawaii mara mma, COVID ma ọ bụ enweghị COVID!